ဒီကနမှေ့ာ ကရြောကျတဲ့ သမီးအကွီး ဆုံးဧရာဝတီလူမငျးရဲ့(၁၂)ပွညျ့မှေးနလေ့ေးကို ဖခငျမတ်ေတာအပွညျ့နဲ့မှေး နဆေု့မှနျတောငျးပေးလိုကျတဲ့ လူမငျး – XB Media Myanmar
“ဒီကနမှေ့ာကရြောကျတဲ့သမီးအကွီးဆုံးဧရာဝတီလူမငျးရဲ့(၁၂)ပွညျ့မှေးနလေ့ေးကိုဖခငျမေ တ်တာ အပွညျ့နဲ့မှေးနဆေု့မှနျတောငျးပေးလိုကျတဲ့ လူမငျး”
မငျးသားလူမငျးကိုတော့ ပရိသတျတှကေ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျထငျပါတယျ။ လူမငျးက တော့ ဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျမှုတှကွေောငျ့ အောငျမွငျနတေဲ့သူတဈဦး ပါပဲ နျော။ လူမငျးကတော့ ဇနီးခြောလေး ခငျစံပယျဦးနဲ့ သမီးတဈယောကျသားတဈယောကျတို့နဲ့ အ တူ သာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူတဈဦးပဲဖွဈပါတယျ။
သူရဲ့ အားလပျခြိနျတိုငျးမှာ ကလေးတှကေို အခြိနျပေးရငျး သာယာတဲ့ နရေ့ကျလေးတှကေို ဖွတျ သနျးလကျြရှိပါတယျ။ သူတို့မိသားစုတှရေဲ့ အမှတျတရပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေို လူ မှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးလရှေိ့တဲ့သူတဈဦးပါပဲနျော။
စကျတငျဘာလ( ၂၃)ရကျ နမှေ့ာ ကရြောကျတဲ့ သမီးကွီးဧရာဝတီလူမငျးရဲ့မှေးနဖွေ့ဈ တာကွော ငျ့ လူမငျးက” ၂၃ . ၉ . ၂၀၂၀ သမီးလေး ဧရာဝတီလူမငျး (၁၂) နှဈပွညျ့မှေးနေ့ အမှား/အမှနျ ၊ ဓမ်မ/အဓမ်မ ကိုခှဲခွားသိ မွငျ နိုငျသော ဉာဏျပညာကိုရရှိပိုငျဆိုငျနိုငျပါစေ”လို့ဆိုပွီး သမီးဖွဈသူ (၁၂) နှဈပွညျ့မှေးနလေ့ေး ကို ထူးခွားစှာ ဆုမှနျတောငျးပေးလိုကျတာလေးကို လူမှုကှနျယကျစာ မကျြနှာပျေါမှာ ရေးသားဖျော ပွထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
သမီးအကွီးဆုံး ဧရာဝတီလူမငျးရဲ့ (၁၂)နှဈပွညျ့မှေးနလေ့ေးဖွဈတာကွောငျ့ ပရိသတျတှလေညျး ခဈြခငျအားပေးတယျဆိုရငျ မှေးနဆေု့မှနျတောငျးလေးတှကေို ရေးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော။ ဖတျရှု ပေး ကွတဲ့ ပရိသတျတှအေားလုံးသာယာပြျောရှငျတဲ့နရေ့ကျလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
Source….Ayarwaddy Lu Min’s Facebook
“ဒီကနေ့မှာကျရောက်တဲ့သမီးအကြီးဆုံးဧရာဝတီလူမင်းရဲ့(၁၂)ပြည့်မွေးနေ့လေးကိုဖခင်မေ တ္တာ အပြည့်နဲ့မွေးနေ့ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်တဲ့ လူမင်း”
မင်းသားလူမင်းကိုတော့ ပရိသတ်တွေက ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လူမင်းက တော့ ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုတြွေေ ကာ င့် အောင်မြင်နေတဲ့သူတစ်ဦး ပါပဲ နော်။ လူမင်းကတော့ ဇနီးချောလေး ခင်စံပယ်ဦးနဲ့ သမီးတစ်ယောက်သားတစ်ယောက်တို့နဲ့ အ တူ သာယာတဲ့မိသား စုဘဝေ လးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူရဲ့ အားလပ်ချိန်တိုင်းမှာ ကလေးတွေကို အချိန်ပေးရင်း သာယာတဲ့ နေ့ရက်ေ လးေ တွကို ဖြတ် သန်းလျက်ရှိပါတယ်။ သူတို့မိသားစုတွေရဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်ေ လးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို လူ မှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိ တဲ့သူတစ်ဦးပါပဲနော်။
စက်တင်ဘာလ( ၂၃)ရက် နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ သမီးကြီးဧရာဝတီလူမင်းရဲ့မွေးနေ့ဖြစ် တာကြော င့် လူမင်းက” ၂၃ . ၉ . ၂၀၂၀ သမီးလေး ဧရာဝတီလူမင်း (၁၂) နှစ်ြ ပ ည့်မွေးနေ့ အမှား/အမှန် ၊ ဓမ္မ/အဓမ္မ ကိုခွဲခြားသိ မြင် နိုင်သော ဉာဏ်ပ ညာကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ”လို့ဆိုပြီး သမီးဖြစ်သူ (၁၂) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေး ကို ထူးခြားစွာ ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်တာလေးကို လူမှုကွန်ယက်စာ မျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားဖော် ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သမီးအကြီးဆုံး ဧရာဝတီလူမင်းရဲ့ (၁၂)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးဖြစ် တာေ ကြာင့် ပရိသတ်တွေလည်း ချစ်ခင်အားပေးတယ်ဆိုရင် မွေးနေ့ဆုမွန်တော င်းေ လးတွေကို ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်။ ဖတ်ရှု ပေး ကြတဲ့ ပရိသတ်ေ တွအားလုံးသာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုေ တာင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။